Aiza no hisakafoanana any Madrid? Trano fisakafoanana natolotra 9 ao an-tanàna | Vaovao momba ny dia
Aiza no hisakafoanana any Madrid? Trano fisakafoanana 9 natolotra tao an-tanàna
Madrid dia tanàna kosmopolitanina miaraka tolotra gastronomic tena tsara. Tsy misy farany ny azo atao ary azonay atao ny milaza fa afaka manandrana lovia avy amin'ny kontinanta rehetra eto an-drenivohitra ianao. Na izany aza, rehefa malalaka be ny tolotra dia sarotra ny misafidy. Raha tsy avy any Madrid ianao ary mitsidika dia mety matahotra ny hipetraka amin'ny toerana tsy mety ianao ary hiafara amin'ny fandoavana vola be ho an'ny sakafo.
Etsy ankilany, raha avy any an-tanàna ianao na mandeha mandrisika dia mety hiafara amin'ny fisakafoanana any amin'ny toerana mitovy hatrany. Raha very tanteraka ianao na raha te hahita toerana vaovao dia sambatra ianao Te hahafantatra izay hihinana ao Madrid ve ianao? Amin'ity lahatsoratra ity dia mizara trano fisakafoanana 9 atolotra anao eto an-tanàna aho.
1 Ny Escarpín
4 Ben'ny tanàna Taqueria El Chaparrito
6 Trano Lhardy
7 Ny lakolosy
8 Tavern sy Media
Ny fitadiavana trano fisakafoanana ahafahanao misakafo tsara sy mora eo afovoan'i Madrid dia mety ho fanamby. Ny Escarpín dia Trano cider asterianina tamin'ny androm-piainany Ary io dia iray amin'ireo toerana hiafaranao feno ny kibonao amin'ny vidiny mirary. Any Calle Hileras no misy azy, manakaiky ny Ben'ny tanàna Plaza. Nanokatra ny varavarany ilay trano fisakafoanana tamin'ny taona 1975 ary nanjary toerana maoderina sy nohavaozina izy, ary mitazona ny maha izy azy nentin-drazana.
Ny Escarpín dia manolotra a menio isan'andro tena feno, miaraka amina taranja voalohany sy faharoa, 12 euro ihany. Ho fanampin'izany, ny meniny dia samy hafa be, afaka misafidy menio mahafinaritra ianao na misafidy lovia Asturian mahazatra. Raha mandeha ianao, dia aza hadino ny manandrana ny fromazy cachopo manokana telo, tsy misy afa-tsy ao an-trano, sy ny tsaramaso misy hombo, izay tena tsara indrindra.
Tiako i hummus. Raha ny marina dia azoko raisina isan'andro isan'andro amin'ny fiainako izany nefa tsy mankaleo. Na izany aza, tsy noeritreretiko velively ny fisian'ny trano fisakafoanana iray izay hampifantoka ny menany rehetra amin'ity lovia ity, avy any Moyen Orient. La Hummuseria, nosokafan'ny mpivady israeliana tamin'ny 2015, manolotra sakafo mahasalama misy safidy vegan izay hummus no mahery fo. Noho izany, raha tia legioma, zava-manitra ianao ary, mazava ho azy, hummus, tsy azonao atao ny tsy mahita an'io trano fisakafoanana io! Izany dia ny fampisehoana fa afaka mihinana any ivelany ianao, mankafy tsiro tsy voatanisa ary mitazona sakafo mety.
Tena tsara koa ilay toerana. Ny haingo maoderina, ny hazo ary ny fitambaran'ny loko dia mahatonga an'i La Hummuseria ho toerana tena ahazoana aina miaina vibe tsara ianao.
Raha mandalo ianao na raha toa ahy dia tianao ny tanàna dia tsy afaka miala ao Madrid ianao raha tsy mankafy ny iray amin'ireo fomba fijery tsara indrindra eto an-drenivohitra. Misy trano fandraisam-bahiny izay, amin'ny rihana avo indrindra, manana Terras hisakafoanana ary hisotro. Na dia tsy dia mora loatra aza ireo toerana ireo, dia mendrika ny mandeha indraindray.
Ny terrasin'ny Hotel Iberoestar las letras, Attic 11, no tiako indrindra. Miaraka amin'ny atmosfera tanora sy tsy misy ahiahy, Attic 11, no toerana mety hijerena ny filentehan'ny masoandro, manaova cocktails ary mihaino mozika tsara. Amin'ny sabotsy sy zoma alina dia mandrindra ny fotoam-pivoriana DJ izy ireo, drafitra tsara raha mitady hifalifaly vetivety amin'ny toerana manavao sy manokana ianao.
Lafiny iray mahaliana iray hafa koa ny nahandro azy, miorina amin'ny sakafo Mediteraneana sy mamokatra Gourmet fiaviam-pirenena. Ireo lovia dia noforonin'i chef Rafael Cordón ary voaomana amin'ny a Gastro Bar any ivelany, raha jerena ny mpanjifa.
Ben'ny tanàna Taqueria El Chaparrito
Indraindray izahay te-hiovaova sy hanandrana zava-baovao, soa ihany fa i Madrid no tanàna mety indrindra hanaovana izany. Ho an'ny 2020 - 2021 dia nomena anarana hoe Ibero-American Capital of Gastronomic Culture. Noho izany raha tianao ny sakafo latinAza matahotra fa tsy mila misidina fiaramanidina ianao isaky ny faran'ny herinandro vao hankafizinao.
Raha ny tenako manokana dia liana amin'ny gastr gastrikan'ny Mexico aho ary efa nitsidika taquerías samihafa tany Madrid. Tsy isalasalana fa ny "Ben'ny tanànan'i El Chaparrito" no tiako indrindra. Toerana iray izy io, eo amin'ny 200 metatra miala ny plastikan'ny Plaza no misy azy ary mora vidy tokoa. Manolotra taco amin'ny 1 euro izy ireo, mba hahafahanao manandrana ny menio iray manontolo .Mahafinaritra izy ireo! Nandeha tany Mexico aho ary afaka mianiana fa ny sakafo avy amin'ity toerana ity dia mandefa anao.
Raha eo afovoany ianao ary tsy te handany vola be dia mahaliana tokoa ity drafitra ity. Tena tsara tarehy ilay toerana, Voaravaka loko mamirapiratra, rindrina ary antsipiriany izay hahatonga anao handeha. Tena sariaka ny mpiasa. Raha manam-potoana kely ianao dia mamporisika anao hipetraka eo amin'ny fisotroana aho, manafà margarita vitsivitsy sy tacos roa, ny cochinita pibil ary ilay pasteur klasik tacos al.
Raha mbola tianao mandeha mamaky ny tsiro, Ho tianao ny Miyama Castellana. Nisokatra tao Madrid ity trano fisakafoanana japoney ity tamin'ny taona 2009, ary nanomboka teo dia naharesy ireo mpitia nahandro Japoney izy io.
Eo amin'ny Paseo de la Castellana, ilay toerana, minimalist ary milay, dia mety indrindra hankafizanao sakafo lava miaraka amin'ny namana na fianakaviana. Ilay chef, Junji Odaka, dia nahavita nanamboatra menio niaraka tamin'ny ny ankamaroan'ny lovia nentim-paharazana ao Japon, manome azy io ho an'ny maoderina ary hatsaran-tarehy karakarainy fatratra.
Ny trano fisakafoanana dia tsy mora vidy indrindra, fa ho an'ny nahandro tena avo lenta, ny vidiny koa tsy dia lafo loatra. Anisan'ny ilaina amin'ny menio misy azy ny: hena wagyu, ny sashimi ny omby, ny nigiri an'ny tuna ary, mazava ho azy, ny sushi.
Rehefa tonga any amin'ny tanàna vaovao ianao, ny zavatra mahaliana dia ny manandrana ny lovia mahazatra azy. ny Lasopy Madrid Io no fanao nentim-paharazana indrindra amin'ny gastronomy rehetra an'ny fiarahamonina, noho izany, raha tsy avy any Madrid ianao, dia tsy tokony hohadinoinao ny fotoana hanandramana azy.
Betsaka ny toerana anaovan'izy ireo sakafo matsiro, fa raha sambany ianao… maninona raha atao amin'ny toerana misy tantara izany? Casa Lhardy, metatra vitsivitsy miala an'i Puerta del Sol, dia naorina tamin'ny 1839. Ilay trano fisakafoanana, izay noheverina ho voalohany tany Madrid rehetra, dia nitahiry ny haingo tamin'ny taonjato faha-XNUMX ary hita aza fa voatonona ao amin'ny sanganasan'ireo mpanoratra ny halehiben'i Benito Pérez Galdós na i Luis Coloma. Ka raha te hiaina ilay Madrid fanao mahazatra indrindra ianao dia ity toerana ity ihany no tadiavinao.
Raha ny momba ny laoka dia ho hitanao fa siansa ny mihinana azy. Ao amin'ny Casa Lhardy, amboariny amin'ny ampahany roa izy io, ny lasopy aloha ary avy eo ny sisa. Tiako ny mihinana azy rehetra, heveriko fa, ho an'ny mponina marobe, ity dia fanararaotana lehibe. Saingy, na inona na inona nohaninao azy, matsiro ny stew ary mahatsiaro ho tsara amin'ny ririnina.
Raha manohy miresaka momba ny sakafo mahazatra isika dia tsy afaka manadino ny sandwich sandary. Mety ho toa fitambarana "hafakely" ho antsika izay tsy avy ao an-tanàna izany ary, noho izany, misy olona tsy sahy manandrana azy, fa manome toky anao aho fa ho faty izany. Misy maro trano manodidina ny Ben'ny tanàna Plaza Manompo azy ireo izy ireo ary, na dia feno olona aza izy ireo matetika satria toerana fizahan-tany be dia be izy io, mendrika ny miandry sy mihinana ny sandwichanao rehefa mitsidika ny tanàna ianao.
Ny bar La Campana dia iray amin'ireo malaza indrindra eto Madrid ary mivarotra izy ireo Sandwich Calamari amin'ny vidiny 3 euro fotsiny. Haingana dia haingana ny serivisy ary mangatsiaka be ny labiera Inona intsony no tadiavinao !?
Tavern sy Media
Misy romantika kokoa ve noho ny sakafo hariva tsara ampiarahana amin'ny divay? Taberna y Media no trano fisakafoanana mety hahagaga ny sakaizanao, na iza no tianao, miaraka amin'ny sakafo tena tsara ao anaty tontolo akaiky sy manokana. Inona koa, rariny izany akaikin'ny Retiro Park, iray amin'ireo toerana marika indrindra eto Madrid. Tombontsoa ny mandeha mamakivaky ity havokavoka maitso ity, tsy misy drafitra tsara kokoa hampihena ny sakafo!
Ilay trano fisakafoanana dia manana tantara mahafinaritra be ao ambadik'izany, tetikasan'ny raim-pianakaviana iray, José Luís sy Sergio Martínez, izay nanatevin-daharana ny hevitr'izy ireo hamoronana toerana natokana ho an'ny tapas sy ny sakafo nentin-drazana.
Ao amin'ny trano fisotroana misy azy sy ao amin'ny efitrano fisakafoana, manolotra vokatra tsara kalitao indrindra izy ireo, lovia tena nentin-drazana miaraka amin'ny sakafo haute. Ny takolaka voadidy miaraka amin'ny legioma sy kakao, ny salady an-trano ary ny tripe dia manana tsiro mahavariana. Raha toa ahy ianao, izay mamela toerana kely foana ho an'ny tsindrin-tsakafo, dia tsy ho azonao atao ny manohitra ny fandefasana ilay toast a creamy miaraka amin'ny gilasy vanila.
Vermouth dia andrim-panjakana iray any Madrid, raha te hahatsapa ho Madrilenian ra madio ianao, dia tsy hadino ny ora mampihomehy. Mora ihany ny mahita vermouth tsara any Madrid, misy tranokala manolotra karazany hafa mihitsy aza. Ohatra, La Hora del Vermut, ao amin'ny Tsenan'i San Miguel, manana totalin'ny marika 80 niaviam-pirenena. Izy io dia tempoly natokana ho an'io fisotroana io izay manana menio paoma sy pickles tena tsara koa.
Na eo aza izany, dia eo an-toerana kokoa aho izay manadoka ny fomban-drazana ary, misotro vermouth, tsy misy tsara kokoa noho ny trano fisotroana tsara miaraka amin'ireo barila hita eo. La Taberna de Ángel Sierra angamba ny toerana tena izy hitako teto an-tanàna. Any Chueca, miavaka amin'ny haingon-trano. Ireo tavoahangy mihangona eo amin'ny rindrina, ny hazo maizina, ny valindrihana feno sary sy sary hosodoko, ireo fahatsiarovana vita amin'ny boaty ary ireo taila ao amin'ny Cartuja de Sevilla dia mahatonga azy io ho toerana tokana izay mendrika hotsidihina.
Tena mahafinaritra i Madrid ary azoko antoka fa ho raiki-pitia amin'izany ianao. Manantena aho fa ity lisitr'ireo trano fisakafoanana 9 atolotra eto an-tanàna ity dia hanampy anao hankafy ny gastronomiya, fa raha te hahazo tombony betsaka amin'ny fitsidihanao ny renivohitra ianao dia afaka mahazo aingam-panahy avy amin'ity lisitry ny Zavatra 10 tsara indrindra hatao any Madrid.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Madrid » Aiza no hisakafoanana any Madrid? Trano fisakafoanana 9 natolotra tao an-tanàna
fahasoavana dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara. Raha raisina an-tsaina izany amin'ny diako manaraka any Madrid.